ဆူနာမီနဲ့ သာမာန်လှိုင်းလုံးကြီးဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားတယ်။ ဆူနာမီရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းပုံကို ပေါ့ပေါ့လေး မတွေးလိုက်ပါနဲ့။ - JAPO Japanese News
သော 21 Jan 2022, 12:08 ညနေ
ဆူနာမီဟာ သာမန်လှိုင်းလုံးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံလုံးဝကွဲပြားတယ်ဆိုတာကို သိကြပါသလား?
၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ဂျပန်အရှေ့ငလျင်ကြီးမှာ ငလျင်ထက်ကို ဆူနာမီကြောင့် အပျက်အဆီးကြီးမားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာလောက် ရှိခဲ့လဲဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်သူတွေလည်းရှိခဲ့သလို၊ လှိုင်းလုံးက သိပ်မကြီးပါဘူးကွာ ဆိုပြီး ဘေးလွတ်ရာထွက်မပြေးခဲ့တဲ့လူတွေလည်း သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာ များစွာပါဝင်နေပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ၁ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ တောင်ပစိဖိတ် Tonga ကမ်းလွန်က ရေအောက်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆူနာမီဟာ နောက်တစ်နေ့မှာပဲ ဂျပန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီး လှိုင်းရဲ့အမြင့်မှာ ၁.၂ မီတာခန့်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ရပါတယ်။
၁.၂ မီတာအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းဆိုတာ ပုံမှန်အရွယ်အစားပဲမဟုတ်လား?
ဘာကြောင့် အသဲအသန် ပြောင်းရွေ့ဖို့ လိုအပ်ရတာလဲ?
ဒီလိုတွေးမိကောင်းတွေးမိနိုင်ပေမဲ့၊ ပုံမှန်လှိုင်းနဲ့ ဆူနာမီရဲ့ကွဲပြားချက်ကို နားလည်မယ်ဆို ချက်ချင်းရှောင်တိမ်းဖို့လိုအပ်တာကို နားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်နိုင်ပါတယ်။
သာမန်လှိုင်းဟာ အပေါ်ပုံပါအတိုင်း ရေပမာဏမပြောင်းလဲဘဲ လှိုင်းလုံးအမြင့်တွေရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်မျက်နှာပြင်အချို့က နိမ့်သွားပြီး အမြင့်ပိုင်းမှာစုဆုံသွားခြင်းဖြင့် လှိုင်းလုံးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် တာတမံကိုကျော်သွားလည်း မျောပါမသွားနိုင်ပါဘူး။
တစ်ဖက်မှာလည်း၊ ဆူနာမီကိုပြောရရင် ပင်လယ်မျက်နှာပြင် ရေတက်လာခြင်းနဲ့နီးစပ်ပါတယ်။
အမြင့်တူရင်တောင်မှ ရေပမာဏ တစ်ဖြည်းဖြည်းများလာမှာမို့ တာတမံကိုကျော်ပြီး အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာကာ၊ မြို့ကို ဝါးမြိုသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကွဲပြားမှုကို မတူဘူးလို့ပြောရလောက်အောင် ကွာခြားချက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား?
လှိုင်းလုံးကြီးဆိုရင် ကျောက်ဆောင်ကိုလာတိုက်ပြီးရင် ပြီးသွားပေမဲ့၊ ဆူနာမီဝါးမျိုခံရရင်တော့ ကူဖို့နည်းမရှိပါဘူး။
ဒီလိုအရှိန်နဲ့ချည်းကပ်လာတဲ့ရေဟာ၊ နောက်ဆုံးမှာ ပင်လယ်ထဲကို ပြန်ဆွဲချသွားပါတယ်။
ဆူနာမီကြောင့် သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ အလောင်းကိုရှာမတွေ့တော့တာကလည်း ဒီအချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဝါးမြိုပြီး ပင်လယ်ထဲပြန်ဆွဲချခံရတာကတော့ ကယ်ဖို့နည်းမရှိဘူးနော်။
ဂျပန်လည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာ နေထိုင်သူတွေဟာ ဆူနာမီကို သေချာပေါက်နားစွင့်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ကငလျင်လှုပ်သွားတဲ့အချိန် ကျွန်တော့ဆွေမျိုးတွေတော်တော်များများ ဆူနာမီမှာပါသွားခဲ့တယ်။
ဆူနာကို ပေါ့ပေါ့ဆဆတွေးလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ၁ မီတာလောက်ပဲ ရှိရှိပေါ့…
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းကတော့ လှိုင်းမြင့်လာပြီဆို ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးရုံကလွဲပြီး မရှိပါဘူး။
ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာ ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ခတ်မှုကို ခံစားရပြီဆို မတွေဝေဘဲ အမြင့်ပိုင်းကိုရှောင်ပြေးပါ။
ဂျပန်ကို အားပြင်းတဲ့ငလျင်ကြီးရောက်လာခဲ့ရင်? ဂျပန်အစိုးရကကြေငြာထားတဲ့ အဆိုးဆုံးအခြေအနေ
မီတာ ၅၀ ရှိတဲ့အက်ကွဲကြောင်းကို ၁ ရက်တည်းနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်?